कथा – ‘पुनर्जन्म’ - Deshko News Deshko News कथा – ‘पुनर्जन्म’ - Deshko News
कथा – ‘पुनर्जन्म’
लेखक: हरि कँडेल
भान्छा कोठाबाट आवाज आउँछ, ‘बाबु खाना खान आईजा’
त्यो आवाज हरिको आमाको थियो । उ आफ्नो समानहरु झोलामा हाल्दै थियो । आमाले पुनः चिच्याउनुभयो, ‘यो के गर्दै छ, खाना चिसो भयो ।’
भित्रबाट आवाज आयो, ‘पख्नुन म कपडा मिलाउँदैछु ।’ हरि केहीछिन पछि हतार–हतार भान्छामा छिर्छ । आमा खाना पस्किदै हुनुहुन्छ । हरि मुख खुम्च्याउँछ र भन्छ, ‘आज पनि साग र आलु ?’
आमाले माया गरेर फकाउनु हुन्छ र भन्नुहुन्छ, ‘बाबु साईतको बेलामा यसरी अँधेरो मुख नलगान भन्दै हरिलाई मुसार्नु हुन्छ ।
उ पनि काखे बालक झै आमाको काखमा लुटुपुटु हुन्छ । आमाले ध्युको भाडो झिकेर भन्नुभयो, ‘ल योसँग खा ।’ हरि मख्ख परेर ध्यु र भात खान्छ । आज उ काठमाडौ जादै छ । खाना खाइसकेपछि आमालाई ढोग गर्दै बिदा हुन्छ घरबाट ।
घरबाट अलि मुनि आइपुग्छ । खै के–के सोचेको हो मनले भुइको स–सानो ढुङ्गा खुट्टाले पर फाल्दै हिडिरहेछ । यतिकैमा उस्को बस आयो हतार–हतार उ बसमा चड्यो ।
हातमा टिकट लिएर यताउता आँखा घुमाउछ र उ झसंग हुन्छ । उसको आँखा एउटी सुन्दर युवतीमाथि गएर टक्क अडियो । हेर्दा पनि साक्षात स्वर्गकी परी झै सुन्दर छे । चौडा फराकिलो निधार निधार मुनि सुन्दर ताल जस्तै चञ्चले नयनहरु । दुई नयनको बिचमा माछापुच्छ्रे जस्तै त्यो नाक अनि नाकमुनि फक्रिएको गुलाफझै पिपलपाते ओठ उफ !
‘म उसको रुपको बयान गर्न सक्दिन’ हरिलाई उसको रुपले लठ्ठ पारेको थियो । मदिराको मातको के कुरा गर्नु र हरिलाई त्यो भन्दा बढी उस्को रुपको मात लागेको थियो ।
‘ओ भाई आफ्नो सिटमा बस्नुस् न’ हरि झसङ्ग भएर फर्केर हेरेरेको कन्टेकटर ले भनेको रहेछ । भाग्यबस हरिको सिट पनि उहीँ स्वर्गकी परि बसेको सिटमै रहेछ । अब त के खोज्छ्स कानो आँखा झै भयो ।
हरि गएर आफ्नो सिटमा बस्छ । केटी झ्यालतिर फर्केर बसेकी छे । झ्याल खुल्ला छ । झ्यालबाट आएको हावाले उनको कपाल उडाउछ । उसको केशरासी लामा भएकैले ती हावासंगै उडेर आएको केसले हरिलाई छुन्छ । हरि मदहोस हुन्छ कताकता काउकुती लाग्छ । आँखा बन्द गरेर उसको केश रासीको सुगन्ध लिदैछ !!
उसको नाम राधा । उ अहिले कक्षा १२ मा अध्यनरत छे । उसको घर ऋणि हो । उ अहिले काठमाडौंमा आफ्नो ठूली आमाहरुसँग छे ।
राधा आफ्नो लामा लामा केश रासी सम्हाल्न खोज्छे । उ हरि तिर फर्केर हेर्छे ! राधा पनि हरिलाई हेरेर टोलाउछे ।
हरि पनि भर्खरको लक्का जवान सलक्क परेको शरीर, गोरो चाक्लो अनुहार, सूर्यको पहिलो किरण झै धपक्क बलेको हरिलाई हेरेर राधा मुसुक्क हास्छे र भन्छे, ‘सरी’ हरि मख्ख पर्छ । ‘इट्स ओके’ हरि भन्छ । गाडीले ब्रेक मार्दा दुबै एक अर्कासँग ठोकिन्छन् । एक अर्कालाई हेर्दै हास्छन् ।
त्यतिकैमा हरि मेरो नाम हरि कंडेल भन्दै भनेर हात लम्काउँछ । राधा मुसुक्क हासेर नमस्ते भन्छे दुबै हास्छन् ।
कता जानलाग्नु भएको मिस हजुर ……? राधा बोल्छे, ‘म ठूलो मुमाहरुसँग काठमाडौ जादैछु अनि हजुर नि ….?
हरि के भनुम भनुम हुन्छ र भन्छ, म पढ्नको लागि काठमाडौ जान लागेको । कुराकानी चलिरहेको छ । एक आपासमा परिचयको समय सकिएपछि गाडी खाजा खाने ठाउमा रोकिन्छ । दुबै जना झर्छन् ।
बाहिर आकाश सदाझँै निलो थियो । त्यही आकाशको बक्षस्थलमा सेतो सिमलको भुवाझँै बैशालु मन बोके झै चन्चले स्वाभावमा घरी यता र घरी उता लुकामारी खेल्दै थियो ।
भलै मेरो नजरमा यो सब कल्पनाको दृश्यचित्रमा केन्द्रित भएपनि एक अर्काको समिप्यमा रहेर दुई नयन चार भएर आकाश हेरेका थिए ।
खाजा खाने कार्यक्रम पनि सकियो । सबैजना आ–आफ्नो सिटमा आएर बसे । राधा र हरि पनि आ आफ्नो सिटमा बसे ।
उनीहरु एक अर्कालाई हेर्दै हास्दै छन् । उनीहरु कुराकानीले बिस्तारै मायाको रुप लिइसकेको थियो । यतिकैमा हरिको मुवाहजुरको फोन आयो । हरि फोन उठाउँछ । आमासँग कुराकानी सकिएपछि हरि बोल्यो, ‘हजुरको नम्बर दिनुन राधा जि । राधालाई पनि घ्युँ कहाँ पोखियो भागमा “ भने झै भयो । उसलाई कसरी माग्नु होला हरिको नम्बर भएको थियो । उसले हतार हतार नम्बर दिई ९८४७२३….।
हरि यो नम्बर आफ्नो मोबाईलमा सेभ गर्छ । हरि नम्बर सेभ गरेपछि चुप्प भएर बस्छ । यो कुराले राधालाई पिरोल्छ । मन मनै मेरो नम्बर लिने आफ्नो चाहिँ नदिने । अब सहन नसक्नु भयो र उस्को मोबाईल तानेर अनि आफ्नो नम्बर डायल गरि र चुपचाप बसी । गाडी आफ्नै गतिमा हिडिरहेछ । उनीहरुपनि मिठा–मिठा बातमा भुलिरहेका छन् ।
दुबै जनाको मन मुटुमा बैशालु तरङहरु दौडिरहेको छ । गाडी घरीघरी मोड घुम्तीहरुमा मोडिन्छ । उनीहरु पनि सोही गतिमै एक आपसमा टाँसिनपुग्छन् । अनि हास्छन् ।
पर क्षितिजमा सुर्य आफ्नो पखेटा फिजाउदै चन्द्रमासंगको मिलनमा आतुर छ । दुबै जना एक अर्काको माया पोख्न आतुर छन् । यतिकैमा गाडी घचक्क रोकियो दुबैजना झस्याङ भए ।
खाना खाउ है सबैजना भनी ड्राइभर झर्यो । उनीहरु पनि झरे । खाना खानलाई टेबलमा गए । जाडोको मौसम तातोतातो खाना खाए दुबैजनाले फेरि गाडिमा चढे । अब दुबै जनालाई एउटै पिरले सताएको छ, किनकी उनीहरु छुट्टिने बेला आएको छ । मुटुमा एउटा न मीठो कम्पन छोड्दैछ ।
के गर्नु चाहेर पनि एकै हुन न मिल्ने समय थियो । हरि टाउकोमाथि गरेर पल्टिरहेको छ सिटमा । राधा उसको कुममा टाउको राखेर ढल्किरहेकी छ ।
उनीहरु एक आपसमा हात समाइरहेका छन् । सुक्क सुक्क आवाजले हरि झस्कियो । राधाको त्यो आवाजले मौनता चिर्यो ।
हरिले उसको चिउडोमा हात राखेर आफू तिर फर्कायो र सोध्योे ‘रोएकी राधु’ आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु झरेका थिए । सुन्दर मुहारमा ती आँसु हरिलाई खपी नसक्नु भयो । हरिले उसका आँखाका आँसु पुच्दै भन्यो ।
किन रोएकी तिमीलाई ममाथि बिस्वास छैन र …..? राधाको बोली फुटेन । झन सुक्कसुक्क गर्दै रुन थाली..!
हरिले राधालाई अँगालोमा कस्यो । दुबैजनाको आँखा भिजे ।
राधा बोली, ‘हरि तिमी मलाई भुल्न त भिल्दैनौ नि । आँखाभरी आँसु पार्दै आशाका भावले भनी । हरिको मुटु गाठो परेर आयो र भन्यो, ‘राधा जबसम्म दिन र रात हुनेछ, आगोले जबसम्म ताप दिनेछ तबसम्म फुलले राग दिनेछ । यो हरिले तिमीलाई कहिल्यै भुल्ने छैन ।
हरेक जुनि त भन्न सक्दिन किनकी मैले अरु देखेको छैन तर जबसम्म यो मुटुको धड्कनमा कम्पन हुनेछ । मेरो स्वासमा आश हुनेछ । म तिमीलाई नै मात्र तिमीलाई माया गर्नेछु मेरो बिस्वास गर राधु’ दुबैजना एक अर्कालाई हेर्दै मन बुझाए ।
गाडी आफ्नो रफ्तारमा गुडिरहेछ । हरि र राधाको छुट्टिने समय नजिक आईरहेछ । के गर्नु समय बलवान् छ । समयको अगाडि हामीले घुडा टेक्नुपर्छ । हुदाहुदै गाडी काठमाडौको कलंकी आएर रोकियो । गाडीबाट राधा अध्यारो मुख बनाउँदै झर्दै थिइन् ।
ढोकाबाट तल झर्ने बेलामा पनि फर्किएर हेरिन् । हरि राधाको अनुहारमा मायाको भाव छताछुल्ल भएको प्रष्ट देखेको थियो । हरिको अनुहारमा पनि बिछोडको पिडा प्रष्ट देखेकी थिइन् राधाले ।
यात्रु उत्रिएपछि बस गन्तव्यतिर गुड्न थाल्यो । हरि झ्यालबाट टाउको निकालेर राधालाई हात हल्लाएर बाइबाइ गर्दै थियो । हरिको तन मात्र थियो बसमा मन त राधाले लगेकी थिइन् । बसपार्क आयो । सबैजना उत्रिए हरिलाई भने त्यो सिट छोड्न मन नै लागेको थिएन । राधा बसेको सिट भन्दै हातले छामेर अन्तिममा उत्रियो ।
आज भानु जयन्ती, विविध कार्यक्रम गरि मनाइँदै
काठमाडौं, असार २९ आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०७ औं जन्मजयन्ती मनाइँदैछ । जन्मजयन्तीको अवसरमा आज
शशी लुमुम्बू छोरा ! रुन्छस् रे तँ सम्झेर घर लेख्छस् रे कवितामा गाउँ र आमा
धनगढीमाई नगरपालिकामा एक साता ‘लकडाउन’
सिरहा, साउन २६धनगढीमाई नगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेको जनाउँदै एक साताका लागि नगरक्षेत्रमा लकडाउन जारी
मेडिसिटी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित वृद्धको मृत्यु
काठमाडौं, साउन २६ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत एक कोरोना संक्रमित वृद्धको मृत्यु भएकाे छ। ६४ वर्षीय